I-Logitech MX Ergo, ii-trackballs zisenokunika iimfazwe ezininzi | Ndisuka mac
Sele kuyiminyaka ndilikholwa kwi-trackpad. Kunokuthiwa okoko ndaqala ukusebenzisa iMac yam yokuqala ndiye ndasuka ndathiya umzila wendlela weencwadana zamanqaku zakudala ukuba ndizithande, beka imouse ecaleni. Nangona kunjalo, i-MX Ergo entsha evela kwiLogitech ibambe ingqalelo yam kwisibhengezo sayo, mhlawumbi kuba ixesha elide, ngaphambi kokuba ndisebenzise iMac, bendikhe ndasebenzisa itrackball nayo ekwiLogitech.
Yindlalifa kuninzi lweempawu ezenze ukuba iLogitech MX Master kunye neMX Master 2S iphumelele, oku UMX Ergo usinika amaqhosha alungelelanisiweyo akudala ngenkqubo yolawulo ngebhola esisebenza ngayo nasesithupheni ngaphandle kwesidingo sokuhambisa isandla, kunye nokubanakho kokuhlengahlengisa ukutyekela kwe-ergonomics enkulu. Sivavanye kwaye sikuxelele imbonakalo yethu.
1 I-Ergonomics ithathe ubuninzi
2 Amaqhosha anokuqwalaselwa
3 Unxibelelwano lweBluetooth
I-Ergonomics ithathe ubuninzi
I-Trackballs ibikho kwihlabathi leekhompyuter ixesha elide kuneempuku eziqhelekileyo, nangona kunjalo ziye zasilela ukufumana indawo phakathi kwabasebenzisi abaqhubeka nokubabona njengothileyo ongaqhelekanga kwaye onzima ukuphatha ipheripherali. Akukho nto inokudlula kwinyani, kuba kunokuba kubonakala ngathi ukuphatha ibhola kunzima ngakumbi kunokuhambisa imouse etafileni, inyani kukuba kungekudala uyayibamba le nkqubo yolawulo kwaye intle kakhulu. Ngale logballch trackball isandla sakho siyakuphumla ngokupheleleyo kuyo, ngaphandle kokuhambisa enye into ngaphandle kwesithupha sakho kunye nesalathiso kunye neminwe ephakathi ukufikelela kuwo onke amaqhosha afakwe yi-MX Ergo.
Kule nto sinokongeza ithuba lokuhlengahlengisa ukutyekela kwitrackball ukuze sikhululeke ngokusemandleni. Ndikhethe indawo ethambekele ngakumbi ngasekhohlo, kum ngendalo ngakumbi kunenye. Akukho manqaku aphakathi, kuba sisiseko semagnethi esidityaniswe kwiindawo ezimbini ngaphandle kokwenza uhlengahlengiso oluhle.
Ukuza kuthi ga ngoku asikathethi nto ikhetheke ngale bhola yomkhondo eyibeka yodwa ngaphandle kweklasikhi engakhange iguquke kwiminyaka. IpheEyona nto intle malunga nale MX Ergo kukuba ibandakanya into abayithandayo kakhulu malunga ne-MX Master yoluhlobo olunye: amaqhosha ayo anokuqwalaselwa. Ziyafikeleleka ngaphandle kokwenza ukungqubana ngesandla, iminwe ngendlela yendalo ifikelela kuwo onke amaqhosha, kwaye nangona ekuqaleni inokudideka, uyawasebenzisa kwangoko.
I-MX Ergo inevili lokuhambisa elinokucofa kwaye lihanjiswe ngasekhohlo nasekunene, amaqhosha amabini "aqhelekileyo" ukucofa kwiscreen, iqhosha lokudibanisa ikhompyuter kunye ngeememori ezimbini ezikuvumela ukuba utshintshe ukusetyenziswa kweekhompyuter ezimbini ngokucinezela, Amaqhosha amabini anokuqwalaselwa ngasekhohlo kunye nelinye iqhosha elikuvumela ukuba uhlengahlengise isantya sesikhombisi somsebenzi ochanekileyo.
Konke oku kunokuqwalaselwa kunye nesicelo esineLogitech yeWindows kunye neMac (unxibelelwano), kwaye kubaluleke kakhulu ukukwazi ukuchitha ixesha lethu elincinci sijonga inani elikhulu lokuqwalaselwa okunokusinika ukufumana ezona zinomdla kakhulu kuthi. Vala usetyenziso, uLawulo lweMishini, bonisa idesktop, usondeze, skrolela kunye neminye imisebenzi engaphezulu, ukwazi nokuseta indibaniselwano yezitshixo kwiqhosha elinye. Ewe iyahambelana "nokuhamba", ukhetho lweLogitech ekuvumela ukuba ulawule ukuya kuthi ga kwizixhobo ezintathu kwaye urhuqe iifayile phakathi kweekhompyuter.
Ndisoloko ndizama ukuqonda ukuba kutheni umdla wabenzi abaninzi ekusinikeni iimpuku ezingenazingcingo kunye neebhodi yezitshixo kodwa basinyanzela ukuba sisebenzise unxibelelwano lwabo oluhlala kwi-USB yomatshini wethu. Ngethamsanqa iLogitech ayenzanga oku nge-MX Ergo yayo, kuba inonxibelelwano lweBluetooth. Ewe kubandakanya isamkeli sayo esingadibanisiyo kodwa kukuwe ukuba uyisebenzise okanye ukhethe iBluetooth, ukhetho endilukhethileyo. Njengoko besenditshilo ngaphambili, ukutshintshela phakathi kweekhompyuter ezimbini, iMac yam kunye neMacBook yam, kulula njengokucofa iqhosha elincinci elibekwe ezantsi kwevili lokuhambisa. Amanani amabini akukhumbuza ukuba loluphi unxibelelwano olusebenzisayo.
Ukuzimela kwale MX Ergo ayisiyongxaki, kuba intlawulo epheleleyo yebhola yomkhondo iya kukunika ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-4 zokusebenzisa okuqhelekileyo, kwaye ukuba ukhe waphelelwa libhetri ungalindelanga, ke ngekhe ulinde ukuze ube nakho ukuyisebenzisa. Ihlawuliswa ngokusebenzisa intambo ye-microUSB abazisa ngayo ebhokisini kwaye idityaniswe ngaphambili kwitrackball, ngokungathi iyimpuku eqhelekileyo enentambo.
I-Trackballs ayinguye wonke umntu, ehamba ngaphandle kokuthetha, kodwa nje ukuba ucalucalulo lokuqala loyisiwe, le MX Ergo iyakukholisa uninzi lwabo bazama oko. Isixhobo esitofotofo esikuvumela ukuba usebenze iiyure ngaphandle kwengxaki (ngekhefu lakho elinyanzelekileyo). Amaqhosha anokuqwalaselwa abe yinto ongenakuyenza ngaphandle kokuba uziqhelile, kunye nokubanakho kokuyisebenzisa ngeekhompyuter ezimbini ekucofeni iqhosha kwenza kube yinto oza kuhlala ufuna ukuyiphatha kunye nelaptop yakho. Indiqinisekisile ukuba ndishiye i-trackpad ... ubuninzi bexesha. Ewe kunjalo, ukuba unesandla sasekhohlo okanye ufunda ukusiphatha ngesekunene kuba akukho thuba lokuyisebenzisa ngasekhohlo. Unayo nge Amazon ukusuka kwi- € 107
ILogitech MX Ergo
Ergonomic kwaye uhlengahlengiso lwentuthuzelo
Iyahambelana neWindows kunye neMacOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Logitech MX Ergo, ii-trackballs zisenokunika iimfazwe ezininzi
I-ApolloOne, umbukeli wezithombe ngeendlela ezininzi